မျက်နှာကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာမယ့်သူဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်သိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း...! - Myanmar Daily Time
HomeKNOWLEDGEမျက်နှာကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာမယ့်သူဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်သိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း…!
July 10, 2019 admin KNOWLEDGE 0
လူ တစ် ယောက် ရဲ့ မျက် နှာကို ကြည့် ရုံ နဲ့ သူ့ အ ကြောင်း ကို အ တိ အ ကျ ပြော နို င် တဲ့ ရုပ် လက္ခ ဏာ ကို ဖတ် တဲ့ ပ ညာ မျိုး ဆို တာ အံ့ သြ ဖို့ကောင်း တဲ့ ပ ညာ တစ် မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ် ရည် သွင် ပြင် က ကံ က ကြ မ္မာ ကို မ သတ် မှတ် နိုင် ပေ မယ့် ဘာ တွေ ဖြစ် လာ နိုင် သ လဲ ဆို တာ ကို တော့ အ နီး စပ် ဆုံး ခန့် မှန်းလို့ ရ ပါ တယ်
ဒါ ကြောင့် တ ရုတ် ရို ရာ ရုပ် လ က္ခ ဏာ ဖတ် ပ ညာ အ ရ လူ ချမ်း သာ တစ် ယောက် ဖြစ် လာ နိုင် ချေ များ တဲ့ သူ တစ် ယောက် ရဲ့ရုပ် လ က္ခ ဏာ တွေ ကို ဖော် ပြ ပေး လိုက် ပါတယ် နော်
မျက် နှာ အ ချိုး အ စား နှစ် ဖက် ညီ ညာ နေ တာ မျိုး က ရှား ပါ တယ်။ တ ကယ် လို့ အဲ့ ဒီ လို မျက် နှာ မျိုး ရှိ ခဲ့ ရင် သူ မ တူ အောင် ချမ်း သာ ကြွယ် ဝ လာ တတ် ပါ တယ်။
အ ပေါ် အောက် အ ရွယ် အ စား တူ ညီ ပြီး တိ ကျ တဲ့ ပုံ စံမျိုး ရှိ တဲ့၊ အ လွယ် မှာ ချွန် နေတဲ့ နှုတ် ခမ်း ရှိ တဲ့ သူ တွေ လည်း ချမ်း သာ ကြွယ် ဝ နိုင် ချေအ လွန် များ တဲ့ သူ တွေ ပါ။ အဲ့ ဒါ မျိုး ကို ပု လဲ နှုတ် ခမ်းလို့ ခေါ် ပါ တယ်။
အ ဖျား နှစ် ဖက် က အ ပေါ်ဘက် ကို ကော့ တက် နေ ပြီး ဒီတိုင်း နေ ရင် တောင် ပြုံး နေ သ လို လေး ဖြစ် နေ တဲ့ ပုံ စံ ပါ။ အဲ့ ဒါ ကို ကြာ ပွင့် ပါး စပ် လို့ခေါ် ပြီး ချမ်း သာ ကြွယ် ဝ မယ့် သူ တွေ မှာ တွေ့ ရ တတ် ပါ တယ်။
မြင့် ပြီး ကျယ် ဝန်း တဲ့ န ဖူး မျိုးကို ပိုင် ဆိုင် ထား တဲ့ သူ တွေဟာ လည်း ချမ်း သာ ကြွယ် ဝနိုင် ချေ များ တဲ့ သူ တွေ ပါ။ ဒါ ပေ မယ့် န ဖူး အ လယ် မှာ မှဲ့ ရှိ နေ ရင် တော့ ကံ သိပ် မ ကောင်း တတ် ပါ ဘူး။
စူး ရှ တောက် ပ တဲ့ မျက် လုံး ပိုင် ရှင် တွေ ရှိ တတ် ပါ တယ်။ လူ တော် တော် များ များ က သူ တို့ ကြည့် တာ ကို မ ခံ နိုင် ပါ ဘူး။ အဲ့ ဒီ လို မျက် လုံး တောက် တောက် တွေ ရှိ တာ က လည်း ချမ်း သာ မယ့် လက္ခဏာ တစ် ခု ပါ ပဲ။
ပါးရိုးတွေက မြင့်ပြီးထင်းနေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလှဘူးလို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့နော်။ အဲ့ဒါက ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ့် သူတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာပါ။
နှာခေါင်းလုံးလုံးလေးက ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုပါ။ အမျိုးသားတွေမှာ ဆို ငွေကြေးကံအလွန်ကောင်းပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေမှာဆို သူမကိုလက်ထပ်တဲ့အမျိုးသားက တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကြီး ပွားလာပါလ်ိမ့်မယ်။
လုံးဝန်းပြီးထင်ရှားတဲ့မေးစေ့ရှိတဲ့သူတွေဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ့်သူ၊ အိုဇာတာကောင်းမယ့်သူတွေ လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
ထင်ရှားပြီးကြီးမားတဲ့နားရွက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ့် သဘောပါပဲ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ ပညာရေးကံ၊ အလုပ်ကံနဲ့ ငွေကြေးကံတွေလည်း အလွန်ကောင်းမယ့်သူပါ။
မကျြနှာကိုကွညျ့ရုံနဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝသူတဈယောကျ ဖွဈလာနိုငျခရြှေိမရှိ သိနိုငျမယျ့နညျး(၈)နညျး
လူ တဈ ယောကျ ရဲ့ မကျြ နှာကို ကွညျ့ ရုံ နဲ့ သူ့ အ ကွောငျး ကို အ တိ အ ကြ ပွော နို ငျ တဲ့ ရုပျ လက်ခ ဏာ ကို ဖတျ တဲ့ ပ ညာ မြိုး ဆို တာ အံ့ သွ ဖို့ကောငျး တဲ့ ပ ညာ တဈ မြိုး ဖွဈပါတယျ။ ရုပျ ရညျ သှငျ ပွငျ က ကံ က ကွ မ်မာ ကို မ သတျ မှတျ နိုငျ ပေ မယျ့ ဘာ တှေ ဖွဈ လာ နိုငျ သ လဲ ဆို တာ ကို တော့ အ နီး စပျ ဆုံး ခနျ့ မှနျးလို့ ရ ပါ တယျ
ဒါ ကွောငျ့ တ ရုတျ ရို ရာ ရုပျ လ က်ခ ဏာ ဖတျ ပ ညာ အ ရ လူ ခမျြး သာ တဈ ယောကျ ဖွဈ လာ နိုငျ ခြေ မြား တဲ့ သူ တဈ ယောကျ ရဲ့ရုပျ လ က်ခ ဏာ တှေ ကို ဖျော ပွ ပေး လိုကျ ပါတယျ နျော
မကျြ နှာ အ ခြိုး အ စား နှဈ ဖကျ ညီ ညာ နေ တာ မြိုး က ရှား ပါ တယျ။ တ ကယျ လို့ အဲ့ ဒီ လို မကျြ နှာ မြိုး ရှိ ခဲ့ ရငျ သူ မ တူ အောငျ ခမျြး သာ ကွှယျ ဝ လာ တတျ ပါ တယျ။
အ ပျေါ အောကျ အ ရှယျ အ စား တူ ညီ ပွီး တိ ကြ တဲ့ ပုံ စံမြိုး ရှိ တဲ့၊ အ လှယျ မှာ ခြှနျ နတေဲ့ နှုတျ ခမျး ရှိ တဲ့ သူ တှေ လညျး ခမျြး သာ ကွှယျ ဝ နိုငျ ခအြေ လှနျ မြား တဲ့ သူ တှေ ပါ။ အဲ့ ဒါ မြိုး ကို ပု လဲ နှုတျ ခမျးလို့ ချေါ ပါ တယျ။
အ ဖြား နှဈ ဖကျ က အ ပျေါဘကျ ကို ကော့ တကျ နေ ပွီး ဒီတိုငျး နေ ရငျ တောငျ ပွုံး နေ သ လို လေး ဖွဈ နေ တဲ့ ပုံ စံ ပါ။ အဲ့ ဒါ ကို ကွာ ပှငျ့ ပါး စပျ လို့ချေါ ပွီး ခမျြး သာ ကွှယျ ဝ မယျ့ သူ တှေ မှာ တှေ့ ရ တတျ ပါ တယျ။
မွငျ့ ပွီး ကယျြ ဝနျး တဲ့ န ဖူး မြိုးကို ပိုငျ ဆိုငျ ထား တဲ့ သူ တှဟော လညျး ခမျြး သာ ကွှယျ ဝနိုငျ ခြေ မြား တဲ့ သူ တှေ ပါ။ ဒါ ပေ မယျ့ န ဖူး အ လယျ မှာ မှဲ့ ရှိ နေ ရငျ တော့ ကံ သိပျ မ ကောငျး တတျ ပါ ဘူး။
စူး ရှ တောကျ ပ တဲ့ မကျြ လုံး ပိုငျ ရှငျ တှေ ရှိ တတျ ပါ တယျ။ လူ တျော တျော မြား မြား က သူ တို့ ကွညျ့ တာ ကို မ ခံ နိုငျ ပါ ဘူး။ အဲ့ ဒီ လို မကျြ လုံး တောကျ တောကျ တှေ ရှိ တာ က လညျး ခမျြး သာ မယျ့ လက်ခဏာ တဈ ခု ပါ ပဲ။
ပါးရိုးတှကေ မွငျ့ပွီးထငျးနလေို့ ကိုယျ့ကိုယျကို မလှဘူးလို့မတှေးလိုကျပါနဲ့နျော။ အဲ့ဒါက ခမျြးသာကွှယျဝမယျ့ သူတဈယောကျရဲ့ လက်ခဏာပါ။
နှာခေါငျးလုံးလုံးလေးက ခမျြးသာကွှယျဝသူတဈယောကျဖွဈနိုငျတယျဆိုတဲ့ သင်ျကတေတဈခုပါ။ အမြိုးသားတှမှော ဆို ငှကွေေးကံအလှနျကောငျးပွီး၊ အမြိုးသမီးတှမှောဆို သူမကိုလကျထပျတဲ့အမြိုးသားက တဖွညျးဖွညျးတိုးတကျကွီး ပှားလာပါလျိမျ့မယျ။
လုံးဝနျးပွီးထငျရှားတဲ့မေးစရှေိ့တဲ့သူတှဟော ခမျြးသာကွှယျဝမယျ့သူ၊ အိုဇာတာကောငျးမယျ့သူတှေ လို့ ပွောလို့ ရပါတယျ။
ထငျရှားပွီးကွီးမားတဲ့နားရှကျတှကေိုပိုငျဆိုငျထားတယျဆိုရငျလညျး ဒါဟာ ခမျြးသာကွှယျဝမယျ့ သဘောပါပဲ။ ဒါတငျမကသေးပါဘူး၊ ပညာရေးကံ၊ အလုပျကံနဲ့ ငှကွေေးကံတှလေညျး အလှနျကောငျးမယျ့သူပါ။
This Year : 164392
Total Users : 190277
Total views : 574450